पढेको कुरा याद हुँदैन ? : यसरी गरौं परिक्षाको तयारी - Pabil News
चैत १० गते, २०७५ - १०:५५
एस.इ.इ परिक्षा २०७५ आउनै लाग्यो । कक्षा १० मा अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थीहरु यतिबेला परिक्षाको तयारीमा व्यस्त हुनुहुन्छ । परिक्षा नजिकिंदै गर्दा कतिपय विद्यार्थीहरु त यसै होप लेस पनि हुन्छन् । मतलब, पढेको केहि याद नै हुँदैन । पढेका कुराहरु कसरी सम्भ,ने त ?, थारै समयमा कसरी धेरै कुरा याद गर्ने ? विद्यार्थीको मनमा सलबलाउने महत्वपुर्ण प्रश्न हो यो । पढेपछि पास मात्रै होइन, पहिलो नै हुने जो कोहीलाई पनि मन हुन्छ । तर सबैको इच्छा पूरा हुन सक्दैन । जति पर्दा पनि परीक्षाका बेला पढेको कुरा लेख्न नसक्दा परिक्षार्थीले सोचेको जस्तो नम्बर नआउने, कोही फेल नै पनि हुन सक्छन् । यसले गर्दा विद्यार्थीहरु चिन्तित हुन्छन् । त्यसैले अब पढ्ने तरिका बदल्नु पर्छ । धोत्लिएर रातो दिन पढ्नु भन्दा पढेको कुरा सम्झनु पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । पढेको कुरामा चासो दिने र पढेको कुरा बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ । पूरा ध्यान दिन जे पढ्दैछौं त्यसमा गहिरो चासो लिनै पर्छ । पढ्ने बेला तपाईंको ध्यान अन्तै छ भने पढेको कुरा याद गर्न सकिन्न ।
विद्यार्थीले अध्ययन गर्दा हरेक शब्दलाई चित्रमा ढालेर पढ्नुपर्छ । हरेक कुरालाई फरक तरिकाले सोच्नुपर्छ। एकोहोरो रटेर हुँदैन । त्यसरी पढेको केहिदिन पनि टिक्दैन । रटेर पढ्दा दिमागमा घुस्दैन । त्यसैले हरेक शब्दलाई कोडिङ गरेर पढ्नुपर्छ । कुनै पाठ गाह्रो लाग्छ भने त्यसलाई केहि कुरामा लिंक गरेर पढ्नुपर्छ । जस्तो तपाईंले कुनै गाह्रो पाठ पढिरहनुभएको छ भने, त्यसलाई रमाइला कुरा, चीज, घटनासँग जोडेर पढ्नुपर्छ । निद्रालाई असर पर्ने गरी अध्ययन गर्नुहुँदैन । बिहान चाँडै उठ्नपनि अलार्मको प्रयोग गर्नु हुँदैन । निद्रा पुग्ने गरी सुत्नुपर्छ । एक घन्टा पढ्दा २० मिनेट आराम गर्नुपर्छ । योगा र ध्यानले दिमागलाई तेजिलो बनाउँछ । पालुंगोको साग, बदाम, ओखरले दिमागको स्मरणशक्ति बढाउँछ । त्यसैले खानामा यस्तो खाद्यको प्रयोग बढाउनुपर्छ । फाष्ट फुडको प्रयोग गर्नु हुँदैन । यसले स्मरणशक्ति घटाउँछ । सकेसम्म रातिभन्दा बिहान पढ्ने बानीको विकास गर्ने । राति अक्सिजन कम हुँदै जाने कारण पढेको सम्झन गाह्रो हुन्छ । विहान ४ बजेदेखि विहानको ९ बजेसम्म पढ्ने उत्तम समय हो । अध्ययन गर्दा मस्तिष्कलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु हुँदैन । दिमागलाइ जवरजस्त आफुले पढेको कुरामा ध्यानमा लगाउनु हुँदैन । निरन्तर पढ्ने गर्नुपर्छ । कुनै कुरामा आफुले पढेको कुरा जोड्ने हो भने दिमागले अरु कुरा सोच्न भ्याउँदैन । ढाड सीधा गरेर पढ्ने । यसले तपाईंको स्वास्थ्यमा नराम्रो असर गर्छ । उत्तानो परेर वा घोप्टो परेर पढ्नु हुँदैन । यसले एकातर्फ स्मरण शक्ति घटाउँछ भने अर्कोतर्फ तपाईंको आँखालाई गम्भीर असर पुर्याउंछ । सकेसम्म अलार्मको प्रयोग नगर्ने । अलार्मले जबर्जस्ती उठाउँछ । बिस्तारै निद्राबाट आफैँ उठ्नुपर्छ । जवरजस्त उठ्दा तपाईंको दिमागलाइ सीधा असर गर्छ । यसले तपाईंको आँखालाई पनि असर गर्छ । सकेसम्म उठ्ने र सुत्ने एउटै तालिका बनाउनुपर्छ ।
यस्ता छन् पढ्ने केही तरिकाहरु ः
पढेको कुरा फेरि दोहोरÞ्याउने र अरूलाई त्यो बताउने मौका पाए नछोड्ने । महत्वपूर्ण कुरामा मनन गर्नु फाइदाजनक हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्छ ।
९. टाइम टेबल बनाउने
पक्कै यस दुुनियाँमा परीक्षालाई रमाइलो मान्ने विद्यार्थी भेट्टाउन निकै कठिन छ । तर सही तरिका समातेर गरिएको परीक्षा तयारीले उत्कृष्ट नतिजा दिने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । जुुनसुुकै तहको परीक्षा तयारी गरिरहेका भए पनि विद्यार्थीले तयारीअघि केही यस्तो तरिका समात्नुुपर्छ जसले उनीहरूलाई परीक्षामा आनन्द प्रदान गर्नुुको साथै सोचेजस्तै नतिजा ल्याउनसमेत मद्दत गर्दछ ।
कुुनै विषयवस्तुु पढ्दा श्रव्यदृश्य सामग्रीले सम्झन निकै सहयोग र्पुयाउँछ । यदि यस्तो उपकरण नभएको खण्डमा महत्वपूर्ण विषयलाई चार्ट वा डायग्राममा उतारेर राख्नुुपर्छ । जसलाई आफूले चाहेको र सम्झन खाजेको अवस्थामा सहजै हेर्न सकियोस् ।
परीक्षा तयारी गर्दा विद्यार्थीले सधैं सम्झनुुपर्ने विषय हो, पुुराना प्रश्नपत्रको अध्ययन । यसो गर्दा परीक्षाको कस्तो फरम्याटमा आउँछ रु उत्तर कसरी दिने वा कस्ताकस्ता प्रश्नहरू बढी महत्वपूर्ण हुुन्छन् भन्ने जान्न सहज हुुन्छ । कस्तो प्रश्नलाई कति समय दिएर लेख्ने भन्ने जान्न पनि यसले सहयोग र्पुयाउँदछ ।
एसइइ असफलताको प्रत्यक्ष क्षतिको भागीदार विद्यार्थी भए तापनि परोक्ष रूपमा अन्ततोगत्वा समग्र राष्ट्रलाई नै दूरगामी असर पर्छ । फलामे ढोकाको रूपमा चित्रित एसइइ परीक्षामा अधिकतम ग्रेड ल्याएर उत्कृष्ट स्थान हासिल गर्न परीक्षार्थीले आफ्नो अध्ययनलाई घनिभूत पारिराखेका छन् । उनीहरूको परीक्षा तयारीलाई अझ सशक्त र प्रतिफलमुखी बनाउन कठिन महसुस गरिएका विषयलाई अलि बढी महत्व दिंँदै सबै विषयलाई समानुपातिक रूपमा अध्ययन गर्नेगरी दैनिक समयतालिका बनाएर नियमित रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ । सहपाठीहरूको सानो समूह बनाएर छलफल गरेर पढ्ने बानी बसाल्नुपर्छ । पढाइको साथसाथै विगतका प्रश्नहरूको तोकिएको समयमा सक्नेगरी उत्तर लेख्ने अभ्यास गर्ने र आफ्नो विषय शिक्षकलाई देखाएर सल्लाह लिन अल्छी गर्नुहुन्न । परीक्षालाई हाउगुजीको रूपमा नलिई सहज र स्वाभाविक रूपमा दिने मनस्थिति बनाउनुपर्छ । मानसिक एवं शारीरिक क्षमताभन्दा बढी थकान हुनेगरी अनिँदोसमेत बसेर लगातार पढ्दा स्मरणमा ह्रास आउँछ र आफूले सोचेजस्तो जाँच दिन सकिन्न । परीक्षा दिन जाँदा मैले राम्रोसँग जाँच दिन्छु र राम्रो नतिजा आउंँछ भन्ने दृढविश्वास एवं उच्च मनोबलको साथ परीक्षाहलमा प्रवेश गर्नुपर्छ । विषय अनुसार आवश्यक सामग्री कलम, पेन्सिल, रुलर, क्यालकुलेटर आदिको तयारी घरबाट हिँड्नु अगाडि नै जाँच गरेर बोक्नुपर्छ ।
प्रश्नहरू सबै सरसर्ती पढिसकेपछि आफूलाई धेरै आउने प्रश्न पहिला गर्ने र त्यही क्रममा नआउने प्रश्नहरूलाई पछि गर्दा कतिपय प्रश्नका उत्तर पछि सम्झिन सकिन्छ साथै समयको बचत पनि हुन्छ । प्रश्नले मागेको उत्तर यकिन भएपछि प्रश्नको प्रकृति र तोकिएको अंकभार तथा समयलाई मध्यनजर राखेर मौलिकता झल्किनेगरी बुँदागत रूपमा सफा र शुद्धसँग लेख्नुपर्छ । सबै प्रश्नका उत्तरहरू लेखिसकेपछि बाँचेको अन्तिम समयमा लेखेको उत्तरलाई सरसर्ती पढेर छुटपुट केही भए सच्याउनुपर्छ । एसइइ परीक्षालाई अधिकतम उपलब्धिमूलक बनाउन अभिभावकको पनि उत्तिकै महत्त्व रहन्छ । छोराछोरीलाई अनावश्यक दबाब नदिने, उनीहरूको आहारविहारलाई स्वस्थकर बनाउने, पढ्ने–लेख्ने सामग्री तथा बस्ने स्थानको सहजता प्रदान गर्ने र उत्साह र ढाडस दिएर मर्या्दित रूपमा परीक्षा दिन प्रोत्साहित गर्नु एक असल अभिभावकको जिम्मेवारी हो । जसले विद्यार्थीलाई एक्जामफोविया हुनबाट बचाउँछ । यस मानेमा एसइइ अभिभावकको लागि पनि एक समझदार अभिभावक भए–नभएको जाँचिने परीक्षा हो भन्दा अन्यथा नहोला । त्यस्तै विद्यालयले पनि विद्यार्थीको रुचि, क्षमता अनुसारको विषयको छनोट तथा परीक्षालाई सहज रूपमा सामना गर्नसक्ने योग्यताको विकास गराउनुपर्छ । विद्यार्थीको वैयक्तिक विभिन्नता र उसको प्रगतिको गति र क्षमताको आधारमा पठनपाठन र अभ्यासको अवसर प्रदान गर्ने चाँजोपाँजो मिलाउनाले समग्रमा विद्यालयको उपलब्धि उच्च हुने यथार्थता हो । किनकि एसइइ नतिजाको आधारमा विद्यालयको छवि सरकार र समुदायमा कायम हुने भएकाले विद्यालयले आफनो हैसियत र स्तर उच्च राख्ने सुनौलो अवसर हो ।
तसर्थ आफ्ना विद्यार्थीको उपलव्धिस्तर उच्चतम बनाउन अधिकाधिक सकारात्मक प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रश्नपत्र निर्माणमा वैज्ञानिकता, वस्तुनिष्ठता तथा गुणस्तरीयताले पनि परीक्षाको नतिजालाई असर पार्छ । व्यवस्थित, मर्या्दित, निष्पक्ष, स्वच्छ र सौहार्द वातावरणमा परीक्षा सञ्चालन गर्न परीक्षा केन्द्र निर्धारण, भौतिक तथा मानवीय व्यवस्थापन एवं उनीहरूले परीक्षार्थीलाई गर्ने व्यवहारबाट परीक्षाको गुणस्तरीयताको निक्र्योल गर्छ । एसइइ परीक्षा प्रत्यक्ष रूपमा विद्यार्थीका लागिमात्र फलामे ढोका भएजस्तो लागे तापनि परोक्ष रूपमा राज्यले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी अख्तियार गरेको नीति–नियम तथा कार्यक्रम जाँच्ने कसी पनि हो । त्यस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावकले विद्यार्थीको पठनपाठनमा कतिको योगदान र्पुयाए भन्ने कुराको यकिन गर्ने एक सशक्त सूचक विद्यार्थीले प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्क र उत्तीर्ण प्रतिशत नै हो । तसर्थ एसइइ विद्यार्थीका लागिमात्र परीक्षा नभएर सम्बन्धित निकाय, विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक लगायत सरोकारपक्षको पनि परीक्षा हो । एसएलसी असफलताको प्रत्यक्ष क्षतिको भागिदार विद्यार्थी भए तापनि परोक्ष रूपमा अन्ततोगत्वा समग्र राष्ट्रलाई नै दूरगामी असर पर्छ । यसको सही विश्लेषण र व्याख्या गरी आआफनो जिम्मेवारी र जवाफदेहिता बहन गर्न ढिलो भैसकेको छ । एसइइलाई मर्या्दित एवं अनुशासित रूपमा सञ्चालन गर्न सबै क्षेत्रबाट इमानदारीपूर्वक आआफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्यौं भने विद्यार्थी कर र डरले नभई रहरले परीक्षा दिन उत्साहित हुन्छन् । अनि एसइइलाई फलामे ढोका नभएर स्वणिर्म ढोकाको रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ ।